Afrika no toerana niandohan'ny andro sivilizasiôna sy ny fizahantany manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Afrika no toerana niandohan'ny andro sivilizasiôna sy ny fizahantany manerantany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Tourism • malaza ankehitriny
Nanatevin-daharana ny UNWTO ny World Tourism Network miaraka amin'ny Board of Tourism any Afrika amin'ny fankalazana ny Andro manerantany fizahan-tany.
Ny 27 septambra 2021 dia andro iray hanadinoana ireo tsy fitoviana, fanamby ary COVID-19.
Ny fizahan-tany dia tafiditra ho an'ny rehetra ary hahomby na dia tsara sy mahira-tsaina aza rehefa manitsy ny tontolo COVID-19.
Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany dia napetraka tamin'ny fivoriana fahatelo an'ny UNWTO tany Torremolinos, Espana tamin'ny 17 septambra 1979 avy amin'ny Nizeriana antsoina hoe IGNATIUS AMADUWA ATIGBI.
Ignatius Amaduwa Atigbi, teratany Nizeriana, no nanolotra ny hevitra hanamarihana ny 27 septambra isan-taona ho Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany, izany no iantsoan'ny olona azy hoe "Andriamatoa. Andro fizahan-tany eran-tany ”.
Androany ny birao fizahantany afrikana dia nankalaza ny andro manerantany ho an'ny fizahan-tany miaraka amin'i Afrika sy izao tontolo izao. Andro nahafinaritra ary andro fanadinoana ny COVID-19
Ny fihetsiketsehana hanombohana ny Andro maneran-tany momba ny fizahan-tany dia natolotry Andriamatoa Ignatius Amaduwa Atigbi tao amin'ny UNWTO tamin'ny taona 1979. Izy no Tale Jeneraly voalohany an'ny Fikambanan'ny Fizahantany Nizeriana (NTDC), izay nantsoina hoe Association Touristianina Nizeriana (NTA), Izy koa dia ny filohan'ny komisiona mitsangantsangana afrikanina (ATC).
Ao amin'ny 1980, ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany nankalazaina ny Andro maneran-tany momba ny fizahantany ho fankalazana iraisam-pirenena ny 27 septambra. Ity daty ity dia nofidina tamin'ny andro 1970, ny lalàna navoakan'ny UNWTO. Ny fananganana ireo lalàna ireo dia heverina ho dingana lehibe amin'ny fizahan-tany manerantany. Ny tanjon'ity andro ity dia ny hampahafantatra ny anjara asan'ny fizahan-tany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary hampiseho ny fiantraikan'izany amin'ny soatoavina sosialy, kolontsaina, politika ary toekarena manerantany.
Ignatius Amaduwa Atigbi tamin'ny 1979 - Andriamatoa Andro maneran-tany fizahan-tany
Nodimandry tamin'ny faha-68 taonany tamin'ny 22 Desambra 1998 ary nalevina tao amin'ny tanàna nahaterahany, Koko, Delta State.
Androany nankalazaina nanerana an'i Afrika sy manerantany ny Andro manerantany momba ny fizahantany.
Ho an'ny maro dia andro tsy fiasan'ny fanahiana COVID-19 ity ary ny fahasimbana naterak'ity valanaretina ity tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
Cuthbert Ncube, filohan'ny fizahan-tany afrikanina no nilaza izany eTurboNews:
“Nankalaza ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahantany aho teo ambanin'ny lanitra afrikanina tao amin'ny Mountain Mountain of Eswatini. Niaraka tamiko ny masoivohon'i Brand ATB Andriamatoa Sandile avy amin'ny fizahan-tany Afrikanina Tatsimo,
Eswatini no trano vaovao ho an'ny Birao Afrikana fizahan-tany.
Lehiben'ny ATB faly mankafy an'i Eswatini amin'ny Andro eran-tany ho an'ny fizahantany
“Ankehitriny dia misokatra ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena ny ankamaroan'i Afrika ary manadihady ny fahasamihafantsika amin'ny lafiny Kolontsaina, ny fahafahantsika mampiasa vola rehefa manaiky ny fiatraikany sy ny fandraisana anjaran'ny fizahan-tany amin'ny fitomboana sy maharitra amin'ny famoronana asa.
Mila manana fampidirana an-tsokosoko eran'izao tontolo izao isika amin'ny fampitoviana ny tany izay mbola tsy namboarina ary i Afrika miaraka amin'ireo tolotra isan-karazany dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fandraisana anjara amin'ny GDP manerantany.
Ny vondrom-piarahamonintsika dia tokony handray soa amin'ny fihodinana sasany, noho izany rehefa mankalaza ity andro ity isika dia tokony hifantoka amin'ny fampiharana ny fizahan-tany ny fizahan-tany anatiny sy ny fiaraha-monina i Afrika ho toy ny làlan-kizorana amin'ny fampahavitrihana maharitra ny toekarem-pizahantsika.
Tsy ampy ny entina amin'ny fankalazana ity andro ity, satria maro amin'ny vondrom-piarahamonintsika no miaina anaty fahantrana. Mila miditra amin'ny fomba feno isika mba hankasitrahana ny rojom-bidin'ny fizahan-tany izay mahasoa ireo mpiambina ny lovantsika. ”
eTurboNews nahazo valiny avy amin'ny firenena afrikana maro, anisan'izany i Angola:
Ambasadaoro ATB: Kuyanga Diamantino: WTD, avy any Angola. Mino ny fanarenana tanteraka izahay, mino ny ezaky ny Sehatra ho an'ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fananganana Toeran'ny fizahantany afrikanina matanjaka. Mino ny Fivoarana África amin'ny alàlan'ny FAMPANDROSOANA FITSARANA MAHASOA